Can Lids Abakhiqizi nabahlinzeki - China Can Lids Factory
I-SOT engu-200 elula evulekile evulekile ye-SOT ne-RPT Ngaphandle kokuthi isiliva lendabuko lingaphela, amakhethi wegolide ayatholakala, ukwenza ngcono ukubonwa. Okwamanje, imibala ehlukene yompompi ingeyokuzikhethela kwakho, njengokuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okwegolide, okumnyama, njll. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izinhlamvu, ikhodi ne-logo kungakhonjiswa emathinini okuphela bese uthepha ngokudweba noma ukufaka embossing. Ukupakisha: ibhokisi amabhokisi kanye Pallets
I-202 SOT Easy open end SOT & RPT Ngaphandle kokuthi isiliva lendabuko lingaphela, amakhethi wegolide ayatholakala, ukwenza ngcono ukubonwa. Okwamanje, imibala ehlukene yompompi ingeyokuzikhethela kwakho, njengokuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okwegolide, okumnyama, njll. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izinhlamvu, ikhodi ne-logo kungakhonjiswa emathinini okuphela bese uthepha ngokudweba noma ukufaka embossing. Ukupakisha: ibhokisi amabhokisi kanye Pallets
206 SOT Ukuphela okuvulekile okulula kwe-SOT & RPT Ngaphandle kokuthi isiliva lendabuko lingaphela, amakhethi wegolide ayatholakala, ukwenza ngcono ukubonwa. Okwamanje, imibala ehlukene yompompi ingeyokuzikhethela kwakho, njengokuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okwegolide, okumnyama, njll. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izinhlamvu, ikhodi ne-logo kungakhonjiswa emathinini okuphela bese uthepha ngokudweba noma ukufaka embossing. Ukupakisha: ibhokisi amabhokisi kanye Pallets
I-RCDL SOT 202
I-202 RCDL SOT Easy open end end SOT & RPT Ngaphandle kokuthi isiliva lendabuko lingaphela, amakhethi wegolide ayatholakala, ukwenza ngcono ukubonwa. Okwamanje, imibala ehlukene yompompi ingeyokuzikhethela kwakho, njengokuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okwegolide, okumnyama, njll. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izinhlamvu, ikhodi ne-logo kungakhonjiswa emathinini okuphela bese uthepha ngokudweba noma ukufaka embossing. Ukupakisha: ibhokisi amabhokisi kanye Pallets
I-Aluminium Can 330ml ejwayelekile, I-Aluminium Can 355ml ejwayelekile, I-Aluminium Can 310ml Sleek, Sleek 200ml Aluminium Can, Sleek 310ml Aluminium Can, I-Aluminium Can 250ml Sleek,